वामदेवकाे लागि चुनाव लाेकतन्त्रकाे भ्रष्टीकरण : डा. भट्टरार्इ
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता वामदेव गौतमको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नं. ७ मा पुनः निर्वाचन गरिनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण भएको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई चरम राजनीतिक अनिष्टको संकेत भएको बताएका छन् ।
बर्दियाबाट पराजित भएका नेता गौतमलाई नेकपाले क्षेत्र नं. ७ मा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेपछि डा. भट्टराईले ट्वीटरमार्फत् आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधामन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले दलीय घेराभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्धीकरण गर्न अपिल गर्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौं ७ का निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर बर्दियाबाट हारेका वामदेव गौतमलाई संसदमा पुर्‍याउन अर्को खर्चिलो चुनाव गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र आगामी दिनमा चरम राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो । बेलैमा होस पुर्‍याऔं ।’
काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद् रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर सो क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी नेकपाले गरेको छ ।